Mashandisiro Aungaita Kumhanyisa Metabolism Yako Uye Kuderedza Kurema Pakarepo | Kudya kweNutri
Michael Serrano | | Matipi ekudzikisa huremu, Chipo chekubhadhara
Kuziva kumhanyisa metabolism yako kunogona kubatsira zvakanyanya, kunyanya kana iwe uchinonoka metabolism. Kana isina kukurumidza zvakakwana metabolism inogona kuve chipinganidzo chisingatenderi iwe kuti uderedze huremu hwaunoda zvisinei nekuedza kwako.
Metabolism ndiyo nzira uye chiyero chinoshandiswa nemuviri wako kushandura chikafu kuita simba nekuchipisa. Naizvozvo ndicho chinhu chinogadza huremu nemafuta emuviri. Uye zvakare, inoratidzira kumhanya kwaunowana mafuta kana kurasikirwa uremu. Tsvaga kuti ndezvipi zvinhu zvinonyanya kupa kuti metabolism yako iwedzere uye nekudaro tanga kupisa mamwe macalorie izvozvi.
1 Ndezvipi zvikonzero zveinononoka metabolism?
2 Zvinhu zvinobatsira kumhanyisa metabolism
2.1 Dzidzira kurovedza muviri
2.2 Inwa mvura yakakwana
2.3 Shandisa iodized munyu
2.4 Inwa kofi
2.5 Idya imwe fiber
2.6 Shandisa B mavitamini, iron uye calcium
2.7 Dzivisa chikafu chausingashiviriri
Ndezvipi zvikonzero zveinononoka metabolism?
Sezvaunoziva iwe, kune anokurumidza metabolism uye anononoka metabolism. Ndicho chikonzero nei vamwe vanhu vachikwanisa kudya zvese vasina kurema, asi vamwe nekukurumidza vanoona chikafu chakawandisa muchiuno chavo. Uye iyo inokurumidza metabolism, inowedzera huwandu hwemakoriori anogona kudyiwa pasina kucherechedzwa pachiyero.
Gender, zera, uye mhasuru uremu zvimwe zvezvinhu zvinokonzeresa huwandu hwemagetsi. Asi iro rakakosha basa pachiyero icho muviri wako unopisa macalorie waizotambwa nemageneti.
Vanhu vane zvishoma nezvishoma metabolism vanowanzoitora kubva kuvabereki vavo kuburikidza nemajini avo. Kunonoka metabolism kunogona kukonzera matambudziko sekunyanyisa uye kufutisa. Sezvo zvinokanganisa mashandisiro anoita muviri simba, Izvi zvinotevera zvimwe zvinowanzoitika zvekunonoka metabolism:
Kudya kwakanyanya kwazvo, kwakakwira mafuta, kana kushoma mumakabhohaidhiretsi
Kurega kudya kana kuchinja nguva dzekudya kazhinji
Zvinhu zvinobatsira kumhanyisa metabolism
Kunyange zvakadaro, kune akati wandei maitiro ane hutano anogona kukubatsira iwe kukurumidza metabolism yako. Saka kana muviri wako uchinonoka kupisa macalorie aunodya, edza aya matipi ari nyore.
Dzidzira kurovedza muviri
Kuita maekisesaizi kunoonekwa seimwe yedzakanakisa nzira dzekumhanyisa metabolism. Kufamba kunobatsira iwe kupisa mafuta, iwo maunganidziro ayo anononoka metabolism yako. Iyo zvakare inovaka mhasuru, iyo yakakosha kune metabolism, sezvo paunowedzera mhasuru iwe, iyo inokurumidza kushanda.
Saka tamba mitambo kana usati watoita, uine chokwadi sanganisa kurovedza muviri pamwe nesimba rekudzidzisa. Kana iwe watove nekurovedza muviri, tsvaga nzira dzekusvitsa zvimwe zvekuita muviri mune yako yezuva nezuva maitiro. Kubuda pachigaro chako maawa maviri ega ega kutambanudza zvishoma uye kuita puranga kana mamwe squats izano rakanaka.
Maitiro ekuwana zvakawanda kubva pasimba rako kudzidziswa
Inwa mvura yakakwana
Metabolism yako inogona kudzikira kana ukasanwa mvura yakakwana. Chikonzero ndechekuti H2O yaizokanganisa kushandiswa kwesimba, kusimudzira kuonda. Saka usakanganwa kuvimbisa muviri wako mvura yainoda mazuva ese. Uye rangarira kuti iwe unogona zvakare kupa mvura kumuviri kuburikidza nezvakawanda zvine hutano chikafu. Muenzaniso mukuru ivhiri.
Shandisa iodized munyu
Iyo utachiona inoda ayodini kugadzirisa metabolism. Tenga iodized salt pane kugara uchiita munyu. Ipfungwa zvakare yakanaka kuve nechokwadi chekuti kudya kwako kunosanganisira chikafu chine iodine, sezvazviri nema prawn.
Caffeine ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kushanda kana zvasvika pakutangisa metabolic injini.. Tea yaizoburitsa zvakafanana maitiro. Kune rimwe divi, caffeine haina kukurudzirwa kune vanhu vanotambura nezvimwe zvirwere. Saka bvunza nachiremba wako kutanga kuti uone kana kunwa kofi kwakachengeteka kwauri.
Idya imwe fiber
Kune akawanda mabasa anoratidza kuti ruzhinji rwevanhu vanodya yakaderera fiber chikafu. Pakati pezvakanaka zvakawanda zvechinhu ichi (icho chaunogona kuwana muzvikafu zvakawanda) chingave chekupa chengetedza metabolism yako ichimhanya zvakakwana.
Shandisa B mavitamini, iron uye calcium
Iwo mavitamini B, iron uye calcium ndevamwe ve zvinovaka muviri izvo zvakabatanidzwa nekukurumidza metabolism. Mbeu dzese dzinobva mavitamini e B, nepo zvouya simbi, funga sipinashi uye nyemba senge bhinzi kana nhokwe. Calcium inowanikwa mune zvinogadzirwa nemukaka uye mumiriwo yakaita se broccoli kana maonde.
Dzivisa chikafu chausingashiviriri
Kune vanhu vazhinji vane lactose kana gluten isingashiviriri. Kuzvimba kunogona kuitika mumatumbu mune aya mamiriro ezvinhu zvinokanganisa zvisirizvo zvakasiyana zvehutano, zvinosanganisira kumhanya kwemetabolism. Kana iwe ukabvunza nyanzvi nezvekuti ungamhanyisa sei metabolism yako kuburikidza nechikafu, ivo zvakare vanowanzo kuraira kudzora sodium uye zvinodzivirira, izvo zvinowanzo kuwanikwa mumarudzi ese ezvikafu zvakapakurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Chipo chekubhadhara » Maitiro ekuchimbidza metabolism
Aya mabhenefiti manomwe emakranberries akaomeswa